အထက်တန်းအပြီး လူငယ်တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ? - Crown Education
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို သူနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စေချင်ကြပါတယ်..
ရွေးချယ်စရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေ များလွန်းတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲ သားသမီးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိဘဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို CROWN Education က ဝေမျှပါရစေ…
ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်သွင်းပြောကြားသွားမလဲ?
► သားသမီးများရဲ့ ဝါသနာ နဲ့ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းများ
► သမရိုးကျကနေခွဲထွက်တဲ့ ဘာသာရပ်မျိုးကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သားသမီးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများ
► မိဘများ သိရှိထားသင့်သော သားသမီးများခေတ်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်များ
► ဒီဘက်ခေတ်မှာ ခေတ်စားလာတဲ့ ပညာရပ်တွေ အကြောင်း အပါအဝင်
► IELTS – TOEFL – SAT – ACT – HND – ABE – NCC စသည့် ပညာရေးစနစ်များအကြောင်းကို
တစ်နေရာထဲမှာ ဝေဝေဆာဆာဆွေးနွေးပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ မြန်မာပြည် ဆယ်တန်း နှင့် iGCSE ဖြေဆို/အောင်မြင်ထားကြတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၊ မိဘများကို ချစ်ခင်လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါရစေ။
Mar 14, 2018 crownadmin News
Counseling အတွေ့အကြုံ (၆) နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မကျော့မွန်သာဟာ CROWN Education ရဲ့ General Manager ရာထူးအပြင် USA – UK – Australia – Switzerland နိုင်ငံတွေအတွက် အဓိက တာဝန်ယူ အကြံပေး နေတဲ့ Senior Counselor တစ်ယောက်ပါ။သူမ တာဝန်ယူထားတဲ့ နိုင်ငံတွေ အတွက် ပညာရေးအကြံပေးမှုအပိုင်း မှာ မိဘ ...